Tag: taranaka Y na an'arivony | Martech Zone
Tag: taranaka Y na an'arivony taona
Marketing iraisana: Fahafantarana ny sokajin-taona samihafa sy ny safidiny
Talata, Desambra 26, 2017 Talata, Desambra 26, 2017 Donna Moores
Ireo mpivarotra dia mitady fomba sy paikady vaovao hatrany hahatratrarana ny mpihaino kendreny sy hahazoana valiny tsara indrindra amin'ny fampielezana marketing. Generational marketing dia paikady iray toy izany izay manome ny mpivarotra fotoana hiditra lalina any amin'ny mpihaino kendrena ary hahatakatra tsara kokoa ny filàna nomerika sy ny safidin'ny tsenan'izy ireo. Inona ny atao hoe Marketing Generational? Ny varotra amin'ny taranaka mifandimby dia ny fizarana fizarana ny mpihaino ho lasa sehatra mifototra amin'ny taonany. Eo amin'ny tontolon'ny varotra, ny